Fikradaha hadiyadaha ugufiican maalintaan Deegaanka Adduunka - ALinks
Fikradaha hadiyadaha ugufiican maalintaan Deegaanka Adduunka
June 4, 2021 Maitri Jha waxyaabo waxtar leh
Sannad kasta 5-ta Juun, Maalinta Deegaanka Adduunka waxaa loo xusaa si kor loogu qaado wacyiga ku saabsan caqabadaha sii kordhaya ee deegaanka sida wasakheynta badda, kuleylka adduunka, isticmaalka joogtada ah, iyo dambiyada duurjoogta.
Iibsashada hadiyadaha bey'adda u habboon waxay muujineysaa inaad daryeel dheeri ah siisay waxyaabaha aad soo iibsatay maxaa yeelay waxaad ka walwalsan tahay deegaanka.
Sii qofka aad jeceshahay barakada dabiiciga waxaan ururinay hadiyadaha ugufiican maalinta deegaanka aduunka.
Dhirta Ubaxyada Qurxoon Ee Ka Socda Magaalada Amazon
Lotus Seeds Seeds Pink & White Colours 15 Seeds @ JUST 199
Maxaad hadiyad ugu siineysaa qofka aad jeceshahay?
Waxay caawin kartaa qofkasta oo ka soo kabanaya dhaawac ama dhacdo walaac badan
Dib-u-cusboonaysiinta maalinlaha ah ee ubaxa lotus waa mid xiiso leh, waana astaan ​​shaki la'aan ah dib-u-dhalashada. (Tani waxay ka dhigeysaa mid ku habboon qof kasta oo ka soo kabanaya dhaawac ama dhacdo walaac leh.) Ubax, dhanka kale, wuxuu leeyahay dardaaran kalifaya oo lagu badbaado. Abuurka lotus wuxuu badbaadi karaa kumanaan sano biyo la'aan wuxuuna wali biqilaa wax kabadan laba qarni kadib.
Abuurka Futaba Fragrance Tulips
Maxaad hadiyad Tulips ugu abuureysaa qofka aad jeceshahay?
Tulips caadi ahaan waxaa lala xiriiriyaa jacayl ku habboon. Tulips, sida ubaxyo kale oo badan, waxay ku yimaadaan midabbo kala duwan, mid walibana macneheeda ayuu leeyahay. Tulips-ka casaanka ah waxay kuxiran yihiin jacayl saafi ah, halka tulips-yada guduudan ay kuxiran yihiin boqortooyada Tulips-ka midabka cad waxaa loo isticmaalaa in lagu muujiyo qiimaha qofka ama in la gaarsiiyo fariin cafis
Maxay hadiyad ugu kortay kuwa aad jeceshahay?
Roses waxay matalaan jacaylka Ilaah ee ka jira adduunka dhammaan noocyadiisa, laakiin midabada kala duwan ee ubaxyada ayaa matalaya fikradaha ruuxi ah ee kala duwan. Ubaxyada cad waxay la xiriiraan daahirnimo iyo quduusnaan. Xarago iyo naf hurid waxaa astaan ​​ubaxyo cas. Ubaxyada huruudda ah waxay la xiriiraan aqoon iyo farxad. Ubaxyada casaanku waxay la xiriiraan qaddarin iyo xasillooni.
Dhirta Midhaha Cajiibka Ah Ee La Siiyo
Lgeedaha emon waxay u taagan yihiin nadaafad, macaan, iyo bogsiin heer ruuxi ah. Waa astaan ​​jacayl, u heellan, iyo jacayl. Liinta, sida safarka, waxay nadiifisaa oo nooleysaa maskaxdeena, jidhkeenna, iyo ruuxyada. Waxay u egtahay qoob-ka-ciyaarka adduunka oo dhan, halkaas oo aad ku jeclaato meel kasta oo aad ujeedo oo aad u maleysid nolosha dibedda.
Geed Muus ah
Caleemaha mooska waxay leeyihiin macno kala duwan oo astaan ​​ah. Caleemaha mooska ayaa astaan ​​u ah bacriminta badan ee Afrika, waxaana looga faa’iideystaa dhaqan bacrimin si looga dhigo dumarka inay noqdaan kuwa bacrimiya. Ma ogtahay in ubaxyada isku badala midhaha mooska ay nadiif yihiin Buddha waxay ka dhigtay geedka muuska astaan ​​u ah wax-u-oolnimada hantida dhulka maxaa yeelay taas aawadeed.
Fikradaha hadiyadaha ugufiican maalintaan Deegaanka Adduunkafikradaha hadiyaddaHadiyadaha Maalinta Deegaanka AdduunkaMaalinta Degaanka Adduunka
Ma u baahanahay Keebaa sameeye?
Waa kuwee wejiga ugu fiican ee lagu dhaqo Hindiya? Hubi Halkan!
Faakuumka ugu fiican ee ka hooseeya 100
Waxyaabaha ugu wanaagsan ee kafeega ee Hindiya! Halkan ka cadee!
Koofiyadda ugufiican ee kayar 5000 ee Hindiya
Waa kuwee shaambada ugu horraysa timaha timaha ee Hindiya? Hubso Bakeylaha!